Ogaden News Agency (ONA) – Mas’uuliyiin Sar Sare oo Dalka Afghanistan Lagu Dilay dilay
Mas’uuliyiin Sar Sare oo Dalka Afghanistan Lagu Dilay dilay
Posted by ONA Admin	/ October 19, 2018
Jeneral Scott Miller oo Mareykan ah, oo wax dhibaato ah aysna gaarin, ayaa booqanayey guriga barasaabka gobolka Kandahar, halkaasi oo uu kulan kula lahaa barasaabka iyo saaakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka.
Ka sokow Razi, oo horey uga bad-baaday dhowr weerar oo Taliban ay doneysya inay kudisho, waxaa weerarkii lagu dilay barsaabkii gobolka iyo madaxii sirdoonka gobolka. Sidoo kale saddex askari oo Mareykan ah ayaa weerarka lagu dhaawacay, ayada oo filimqaade reer Afghanistan ah uu sidoo kale ku dhintay.
Warbaahinta gudaha ayaa sheegay toogashada ay dhacday markii uu kulanka dhammaaday oo saraakiisha ay u socdeen garoon ay cagdhigtaan diyaaradaha qumaatiga u kaca, oo ay ka bixi lahaayeen. Kooxda Taliban ayaa sheegatay weerarka oo ay sheegtay inuu fuliyo qof ku dhex-milmay ciidamada maamulka Kandahar.